SIDEED KU NOQON KARTAA QOF FARXAD BADAN? | www.SomaliAction.tk
SIDEED KU NOQON KARTAA QOF FARXAD BADAN?
shaki kuma jiro in qof kastaa uu jecelyahay inuu mar walba faraxsanaado,oo uu noloshiisa ku qaato farxad,dadkana qofba qofka uu ka farxadda badan yahay ayeynu ka jecelnahay,oo xiiseynaa ag joogiisa Rasuulkana(NNKHA) wuxuu ku duceysan jiray “Allow waxaan kaa maagan gelayaa murugo”.
Hadaba hadii aad dooneyso inaad noqoto qof ku raaxeysta nolosha aduunka oo mar walba faraxsanaada raac talooyinkan:-
1- ha laga helo iimaan qalbigaaga
2- wax tegay tiigsimaad ma leh, ha ka fekerin wixii ku dhaafay
3- ku qanac xukunka Alle,iyo risqiga lagu siiyeye
4- badi xuska Alleh
5- ka nadiifi qalbigaaga xasadka iyo xiqdiga
6- ku dedaal akhriska,kitaabku waa saaxiib wanaagsan
7- nidaami hawlahaaga,maryahaaga,gurigaaga,xafiiskaaga,….
8- ku dedaal socodka iyo jimicsiga,qalbiga fayow wuxuu ku jira jidhka fayow.
9- akhri buugaagta taariikhda ah si aad wax uga ogaato sooyaalka nolosha.
10- ha badsan waxyaabaha ay ka mid yihiin shaaha,kafeega,kana dheerow maandooriyaha
11- ku dedaal nadaafada maryahaaga iyo bilicda muuqaaga.
12- xusuusu in Alle denbi dhaaf badan yahay
13- Alle uga mahad naq nimcooyinka uu ku siiyey ee ay ka mid yihiin araga,risqiga,diinta,caafimaadka,maqalka…….
14- ogow in dadka ay ka mid yihiin kuwa waayey caqligii,caafimaadkii,laxaadkii,……………
15- ku dedaal akhriska qur’aanka,dhegeysigiisa,xifdintiisa,waayo wuxuu qur’aaka daawo ka yahay xanuun kasta.
16- Alle talo saaro,isagaa kugu filane
17- cafi qofka ku dulmiya,xidhiidhi ka ku gooya,u dulqaado ka kugu xad gudba.
18- ku cel-celi kelmada(laaxawla walaaquwata ilaa bilaah),Alle ayey raali gelisaaye.
19- badi istiqfaarta,waxaad helidoontaa risqi,ubbad,cilmi naafica……………..
20- ku qanac muuqaalkaaga,shaqadaada,dhaqaalahaaga, gurigaaga iyo ehelkaaga………….
21- ogow in dhibaato kastaa uu weheliyo fudeyd,maalmuhuna ay is bed-bedalayaan.
22- noqo mid niyad san, hana noqon mid niyad jabsan.
23- ku farax wax Alle ku dooro,waayo waxaa dhici karta wax aad dhibsatid oo wanaag kuugu jiro.
24- u samo fal dadka sida adoo siyaaranaaya kuwa buka,wax siinayaa ka baahan,caawinaaya ka tabaaleysan……
25- ka dheerow malah xun,iyo fikradaha khiyaaliga ah ee buka.
26- ogow hadii dhib kugu dhoco inaadan keli ku ahayn ee ay jiraan dad kula qaba.
27- ogow in aduunyadu tahay meel imtixaan iyo dhib
28- hala fadhiisan dadka xun-xun sida: bakheylada,xasidiinta,…waxay kugu talaalayaan cudurkooda.
29- ku dedaal inaad salaada wakhtigeeda oogto.
30- iska Ilaali dunuubta,waayo iyagaa ah ilaha murugada.
31- dheg ah u dhigin kutiri ku teenta iyo hadalada xun ee suuqa lagu geliyo,waayo waxay dhibayaan ka yidhaahda ee adiga ku dhibi maayaan
32- hadii cadawgaagu ku caayaan ogow inaad tahay qof qiimo leh,waayo hadaadan qiimo lahayn cidba kuma sheekteen.
33- ogow in qofka ku xuntaa ku siiyey xasanaadkiisii.
34- ha isku adkeynin cibaadad iyo sunnaha ee ka dhig meel dhexaad.
35- noqo qof geesi ah oo go,aan iyo doonitaan leh.
36- ku dedaal inaad noqoto qof deeqsi ah si aad u hesho laab furnaan.
37- u fur wejigaaga dadka,oo kula hadal hadalo wanaagsan,iskuna dhul dhig si ay kuu sharfaan.
38- yeelo asxaab faro badan adoo ku xulanaaya dhaqan iyo diin wanaagooda.
39- ku dedaal inaad kasbato ducada labadda waalid si ay kaaga noqoto gaashaan dhibaato kasta.
40- qaybi hawlahaaga oo hal mar dabada hayskugu qaban,balse u yeel wakhti iyo jadwal iyo xili nasasho.
41- eeg qofka kaa hooseeya quruxda,caafimaadaka,aqoonta,dhaqaalaha,shaqada,si aad u ogaato in lagaa liito
42- ogow in qof kasta oo aad la macaamishaa uu leeyahay nusqaan iyo ceeb,hadad doonto walal bilaa nusqaan ahna waxaad ku dhici bilaa walaal,saaxiib,ehel………….
43- iska Ilaali inaad wax u dhinto sharafta dadka,hana laga nabad galo carabkaaga iyo gacantaada.
44- yeelo wakhti aad naftaada ku xisaabiso.
45- ku dedaal inaad kasbato risiqi xalaala,iskana Ilaali xaaraanta iyo inaad dadka wax weydiisatid.
46- xidho maryo caadiya,hana ku caan bixin lebbis gaara.
47- iska Ilaali cadhada.
48- isku day inaad marmar safarto si aad u ogaato inuu jiro caalam aan ahayn kan kugu xeeran ee aad taqaan.
49- ku hayso jeebkaaga buug xusuusu qor(note book)si aad u ilaaliso hawlahaaga,wakhtigaaga,iyo balamada.
50- dadka ku bilow salaanta adoo dhoolo cadeynaay si aad u kasbato qalbigooda.
Waxaa Diyaariyay Wariye Cantar Xasan Bakar
← Qaabka ugu dambeeya ee Aduunka Camerada wax loogu duubo
Gabar guursatay eey →
15 thoughts on “SIDEED KU NOQON KARTAA QOF FARXAD BADAN?”
salan axmad mahadsaniid
salan dhamaan tiin garahan xamad kadiye wad ku mahad san tiihiin waxyabah fiifican eed sosogud biiseen wan idiin mahad celin hayan shuugran
cabdulqaadir cadde says:
a s c. waxaan slaamayaa dhamaan walaalha kuxiran ama aqrista websitka salan kadib, waxaan sigaar ah uga mahad celinaayaa dhalinyarada ka shaqeysa websitka dhamaantood, waxaan si gaar ah ugu mahd celinaayaa gaar ahaan wiilkan dhalinyarada ah ee soo qoray maqaalkaan diiniga ah ee ad iyo aad u qiimo badan waan kaaga mahad celinaayaa aiga inta badan waqtigeyga kuma lumiyo aqrinta websedyada lakiin maqaalkaa sigooni ah ayuu iisoo jiitay.
January 18, 2010 at 10:28
salma waa ali shire oo kuleh isbarasha wanaagsan, abaayo anigu waxaan ahay nin soomaaliyeed oo guurdoon ah, waxaana daganahay wadanka swedan,stockholm,dadaydu waa 43jir,waxaana ahay nin meshuu ugu fiicnaa, igalasoo xiriir cinwaanka. alishirecagey@hotmail.com.mahadsanid…by.
illaahow farxad la,aan hana dhigin aamin aamin
waad mahadsantahay walaal cantar xasan maquulkan wanaagasan ee aad noosoo diyaarisay marlabaad mahadsanid
qofkii in uu qoslo rabo in yar makulaasha (bisada) hafiiryo adigaab qosli doono kkkkkkkkkkkkkkkk
Waan inisalaamay dhamaan tiiin
March 17, 2010 at 15:11
Waan farxayaa marwalba
March 28, 2010 at 07:21
kkkkkkkkkkkkkkkkk…kix kix kix kix… ayoow ayoow maxaa faraha maku daalin miyaaana,, lkn qofkii waxaan dhan qoray noloshuu wax kakasaa cml hee.. hada ka dibna waxaas oo dhan agtooda mala iga waynaayo.. illahow murugada naga kori,, amiiin amiin.. (ani iyo happy 4 ever cml hee maba ka ag dheeraanaayi <3)
Mansha Allaah I love it aad iyo aad baad umahadsantihin dhamaan gaar ahaan qofka nosoqooray page kan mahadsanid !!
Saabir osman says:
Waad ku mahadsantahay walaal fikradahaan wanaagsan waana ka helay waa haabiil kkm oo idinle by
asc dhaman aqritayasha sharfta leh waxa madah iskaleh ôo usugntahay alaah subxaana watacala ee umay konkan iyo waxa dushisa saran waxan mahad sanid leyahay sxb keen nosodiyariyay barnamijkan canter xasan sxb waxan kadhaxlena xikmad iyo rayi wanagsan qasatan waxan leyahay aniahan wey i anfacday sababto ah waxan ahay qof aad udabecad xun wana qatay rayigaga bro wankudhaqmaya hada kadib insha alah alaha inaga dhigo kuwi ku cml fala
October 26, 2011 at 04:58
Asc dhaman dhalinta soboqata halkan iyo shaqalaha websetka mahadsanidin dhaman
alaah baa mahad le idina waad mahadsantihiin